Zorin Grid: gadzirisa makomputa eboka rako nenzira yakapusa | Linux Vakapindwa muropa
Mumavhiki apfuura, nekuda kwekufa kweWindows 7, Zorin OS hurongwa hwenhengo yemhuri neni tiri kutaura nezvakawanda. Iye anoifarira, uye kana ndikasaita kuti ashandise mumwe munhu saKubuntu, ndiye waanozopedzisira ashandisa palaptop yake. Uye zvakare, zvave zviriwo munhau munguva pfupi yadarika ne Zorin OS 15.1 kuburitswa uye nezuro yaive zvekare yekuburitsa zvavaidaidza Zorin gridhi.
Asi chii chinonzi Zorin Grid? Sezvatinoverenga mukudhindwa kweiyo chinyorwa sosi, Chiri chishandiso chinorerutsa kumisikidza, manejimendi uye chengetedzo ngarava mumakomputa anofambiswa neLinux mumabhizinesi, zvikoro nemasangano. Chaizvoizvo uye sezvavanosheedzera chinyorwa, zvichatibatsira kubata ese makomputa esangano zviri nyore sekunge isu taingova nekombuta imwe chete.
1 Zorin Grid inorerutsa manejimendi emakomputa mazhinji
2 Inowanikwa kubva muzhizha rino
Zorin Grid inorerutsa manejimendi emakomputa mazhinji
Zorin Grid inotibatanidza isu kumakomputa ese musangano redu uye ichatitendera kuti tiite kure kure mabasa akadai se:
Isa uye bvisa maapplication.
Gadzira software yekuvandudza uye yekuchengetedza chigamba marongero.
Chengetedza mamiriro emakomputa.
Simbisa mutemo wekuchengetedza.
Chengetedza zvigadzirwa zvehardware uye software.
Gadzira marongero edesktop.
Zorin Grid ichatibvumidza isu kusarudza maitiro ekugadzirisa macomputer kamwe uye sevhisi inozoshandisa izvo sarudzo kune vese kana chete kumakomputa atinoda. Zvese izvi, timu yeZorin inovimbisa, ichaita izvi mabasa inyaya yechipiri uye kwete maawa. Uye zvakare, sezvo iri gore-rakavakirwa sevhisi, isu tinokwanisa kuwana ayo mashandiro chero nguva, chero kupi uye zvese nechengetedzo hwakakwana.
Inowanikwa kubva muzhizha rino
Zorin Grid ichave inowanikwa kubva muzhizha rino uye ichatsigira kubata makomputa anoshandisa anoshanda sisitimu Zorin OS. Mune ramangwana, ichabatsirawo kugadzirisa mamwe maLinux-based operating system. Zorin yakagonesa peji kubva kwavachatizivisa kana rave kuwanikwa iro isu tinokwanisa kuwana kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin Grid: gadzirisa makomputa ese muboka rako zvakapusa seimwe
juliuco nikelado akadaro
kutanga-chiyero, ini ndichazviedza
Pindura kuna juliuco nikelado
Kune makambani senge imwe nzira yeWindows kana system yekuvandudza yakanaka, mumakambani mazhinji havambo gadzirise
Ngirozi Garcia akadaro
Kutenda neruzivo, ini ndichaedza pamakumbo angu kuti ndinyatso ziva, kwaziso,
Pindura kuna Angel García
Izvi zvinotaridzika kunge zvinonakidza, ndatenda. Mukambani mandinoshandira ivo vanenge vanoshandiswa ita zorin.